စင်္ကာပူက ကန့်ကွက်မဲ စည်းရုံးရေး မူကြမ်းစာအုပ် (၈) အုပ်၊ လူတစ်သိန်း နှင့် Ms. Anna | ကျွန်မ၏ခံစားမှုများ သီကုံးရာ လွတ်လပ်ခြင်းအနုပညာ
Worker’s Dormitory များသို့ သွားရောက်ပြီး ကန့်ကွက်ဆန္ဒမဲပေးရေး လှုတ်ရှားမှုများကို ကွင်းဆင်း ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါတယ်။ ထိုသို့ဆောင်ရွက်ရာမှာ မြန်မာပြည်မှ စင်္ကာပူနိုင်ငံသို့် ရောက်ရှိနေကြပြီး အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြသော မြန်မာအလုပ်သမားများအနေနှင့် ၄င်းတို့မသိရှိသေးသော အခြေခံဥပဒေမူကြမ်း၌ ပြဌာန်းထားပြီးဖြစ်သည့် အချက်အလက်များကို မေးမြန်းခြင်းများနှင့် စင်္ကာပူရှိ မြန်မာ့အရေးလှုပ်ရှားသူများမှ ပြန်လည်ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်းများ၊ အသင့်ယူဆောင်လာသော စာရွက်စာတမ်းများကို လက်ဆင့်ကမ်းဖြန့်ဝေပေးခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ သတင်းရရှိပါတယ်။
စင်္ကာပူရှိ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေး တက်ကြွသူများသည် စင်္ကာပူနိုင်ငံရှိ ဘွန်လေး Boonlay, မန်ဒိုင်း Mandi, ကာကီဘူကစ် Kaki Bukit, ဂျလန်ကာယု Jalan Kayu ၊ Woodlands ရပ်ကွက်၊ ဂျွိုင်းတာဝါ Joy Tower အနီးနားတ၀ှိုက်ရှိ မြန်မာအလုပ်သမားအများစုနေထိုင်ရာ Worker’s Dormitory များနှင့် မြန်မာအများစု စုဝေးရာနေရာများမှာ စည်းရုံးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို လိုက်လံပြုလုပ်လျှက်ရှိပါတယ်။ တချို့ နေရာများမှာ မြန်မာများ လူဦးရေ ရာဂဏန်းအထိ စိတ်ဝင်တစား လာရောက်နားထောင်ကြသည် ကိုတွေ့ကြရပြီး တချို့ နေရာများမှာတွင်မူ လူဦးရေ ၅၀ -၃၀ -၂၀ စသည်ဖြင့် လာရောက်နားထောင်ကာ အပြန်အလှန် မေးခွန်းများမေးကြကြောင်းနှင့် ပြန်လည်ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်းများရှိခဲ့တယ်လို့ သတင်းရရှိပါတယ်။
“စင်္ကာပူနိုင်ငံရှိ မြန်မာနိုင်ငံသားများအနေနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမူကြမ်းကို လေ့လာဖတ်ရှုလိုပါလျှင် Consular Office Counter မှာ လာရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ကြောင်းနှင့် သံရုံးပြင်ပသို့ယူဆောင်သွားခြင်း၊ မိတ္တူကူးယူခြင်းများကို မြန်မာနိုင်ငံသံရုံးမှ ခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ကြောင်း” ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။
သို့သော်- စင်္ကာပူနိုင်ငံရှိ ကျောင်းသားလူငယ်များနှင့် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေးလိုလားသူများအနေနှင့် ဆန္ဒခံယူပွဲကော်မရှင်မှ ထုတ်ပြန်ပေးထားသော “မဲရုံမှူးလမ်းညွန်” လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိရှိနားလည်နိုင်ရန်အတွက် စင်္ကာပူနိုင်ငံရှိ မြန်မာသံရုံးသို့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် သွားရောက်မေးမြန်းကြမည်လို့လဲ သတင်းများရရှိပါတယ်။
They only said you cannot copy the book.
Someone can take Digital Camera or used handphone to take photo of all the pages.
Comment by Zay April 23, 2008 @ 3:09 pm
ခေါင်းစဉ်ကို မြင်လိုက်ရတော့ ငယ်ငယ်က ကြည့်ခဲ့ဘူးတဲ့ “ငွေဆယ်သိန်း၊ လူငါးယောက်နဲ့ နန်းကြော့ခိုင်” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကို ပြေးသတိရတယ်…ခွိခွိ။
Ms Anna က တပင်တည်း (ဆံပင်တပင်တည်းရှိသည့် ပုဏ္ဏားကြီးဟု ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်)
Comment by Ko Paw April 23, 2008 @ 3:29 pm
Thank you all Burmese living in S’ pore who have decided to vote “NO”. Actually, maybe hiding from public means it is not worth your time.
Comment by Anonymous April 23, 2008 @ 8:15 pm
VOA and Myanmar Embassy Staff ( Ms.Anna) conversation..
Comment by MHT April 24, 2008 @ 7:38 am